VaChamisa Vanoti Kutadza Kutonga kweZanu PF Ndiko Kwauraya Nyika
Mutungamiri weMDC Alliance, VaNelson Chamisa, vanoti kuoma kuri kuita hupenyu munyika kuri kukonzerwa nekutadza kutonga kuri kuitwa nehurumende ye Zanu PF.
VaChamisa vanoti kuti nyaya yehupfumi hwenyika igadzirisike, hurumende yeZimbabwe inofanirwa kutambira zvido zvevanhu zvinobuda musarudzo sezvakaitwa ku Malawi.
Malawi Congress Party leader Lazarus Chakwera
VaChamisa vanoti havatambiri pfungwa yekuti munyika muve nehurumende yemushandira pamwe weMDC neZanu PF sezvakamboitika muna 2008, asi vanoti kuti zvinhu zvigadziriswe munyika, panofanirwa kuumbwa Transitional Authority inofanirwa kufanobata matomu, munyika moitwa sarudzo dzinotambirwa nemunhu wese.
VaMorgan Tsvangirai, VaRobert Mugabe naVaArthur Mutambara
Studio7 haina kukwanisa kutaura nevakafanobata chigaro chemutauriri weZanu PF, Va Patrick Chinamasa, kuti tinzwe divi ravo sezvo vanga vasiri kubatika panharembozha yavo.
VaChamisa, avo vari kuramba vakatsika madziro vachiti ndivo vakakunda musarudzo yemutungamiri wenyika muna 2018, kunyange hazvo dare reConstitution Court rakatambira zvakaburitswa neZimbabwe Electoral Commission, zvekuti mutungamiri weZanu PF, VaEmmerson Dambudzo Mnangagwa, ndivo vakanga vakunda musarudzo, vanoti matambudziko akatarisana nenyika anogadziriswa chete kana Zimbabwe ikadzoka kuhutongo hwejechetere hunoita sarudzo dzinotambirwa nemunhu wese.
VaChamisa vanoti hurumende yaVaMnangagwa iri kukundikana kupedza huori munyika, uye iri kuenderera mberi ichityora kodzero dzevanhu pamwe nekuvatocha sezvakaitwa madzimai matatu ebato ravo anoti mumiriri weHarare West, Muzvare Joanna Mamombe, Muzvare Cecilia Chimbiri naMuzvare Netsai Marova.
Vatatu ava vanoti vakapambwa vakatochwa vari mumaoko emapurisa, asi hurumende inoti ichi hachisi chokwadi.
Madzimai matatu aya akabudiswa mujeri remadzimai, reChikurubi Female Remand Prison, neChishanu mushure mekubhadhariswa mari inoita zviuru gumi zvemadhora emaRTGS pamunhu.